yokwambathisa Polymer xi yokwambathisa
Iifayile ze-insulators zisetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo eziphantsi ukuya kumandla aphezulu, kwisicelo esahlukileyo, kukho ii-insulators zelayini kunye nezikhululo zesikhululo.
Iifayile zentsimbi ezixhonyiweyo zixhonywe kwipali yombane kumgca wokuhambisa. Ngokwendlela esetyenziswe ngayo nendawo ebekwe kuyo epalini, ii-insulators zemigca zahlulwe zaziindidi ezininzi: I-Insulators yeTop Top Line, ii-Insulators zePost Line, kunye ne-Clamp Top Line Post insulators.
Abathumeli bezithuba zesikhululo babonelela ngenkxaso yokugquma kunye nolwakhiwo lwezixhobo zombane, ukuhambisa nokusasaza izitishi, kunye namanye amaziko ombane ukuya kuthi ga kwi-1100kV.
Ii-insulators zepost zingenziwa nge-porcelain kunye ne-silicone polymer. Ziyilelwe iimarike ezahlukeneyo kwaye zenziwe ngemilinganiselo esemgangathweni, ukuze bakwazi ukuhlangabezana neemfuno zombane nezomatshini ze-IEC, imigangatho ye-ANSI okanye iinkcukacha zabathengi.